Uma uhleleni iholidi, into engcono ongayenza ukuze impilo yakho - ukusungula uhlelo ubuthongo. Abantu abaningi kakhulu ungatholi inani elidingekayo amahora lokuphumula. Abanye abantu bacabanga ukuthi angase abe ubuthongo futhi umsebenzi kancane ngokuvamile, kodwa lokhu kuphela ngoba ingqondo ikhathele ukwazi ukunquma ukuthi yini angabhekana ngayo umsebenzi. Uma une ubuthongo evamile, ukuphila kwakho kuguculwa. Ngezinye izikhathi kuba kugucuka encane kunazo zonke futhi iningi elula, kodwa kunezindlela ukusiza ngisho kulabo abaphethwe nokuqwasha ezinzima. Ngakho, sekuyisikhathi uthole enempilo ezokwenza ngcono impilo yakho!
Thola ukulala kangakanani udinga
Nsuku zonke isimiso umuntu uya emsebenzini, akukwazi yemvelo kakhulu. Ngokuvamile akuthathi kubhekelwe womuntu futhi chronotype ophoqelelwe ukuzivumelanisa. Ngaphezu kwalokho, ukucindezeleka kungonakalisa nobuthongo. Uma une isikhathi esikhululekile, ulale nalapho uzizwa ukhathele, futhi ubone ukuthi mangaki amahora ukulala. Udinga kwezinsuku ezimbalwa ukuze uthole umuntu alulame ngokugcwele, bese kube nemali ethile amahora kuyoba sobala. Futhi, zama ukuhlaziya nezinye imikhuba. Bukela i-TV ngaphambi kokulala? Yidla ebusuku? Ngeke ukwazi ukulungisa isimo, uma ungacabangi ukuthi ngokuvamile niyazenza futhi ithinta indlela iholidi lakho.
Khetha isikhathi sokuhamba ngoba embhedeni
Ungazami ukuyolala kusenesikhathi - kuba umgomo ezingacacile kakhulu, ukuze kunzima kakhulu ukufeza. Kungcono ukuhlela kusengaphambili. Ingabe ufuna ukuvuka ngesikhathi eziyisikhombisa ekuseni? Uyazi ukuthi udinga amahora ayisishiyagalombili ukuphumula? Lala embhedeni wakho at nanye! Zama ukugcina isheduli, ngisho nangezimpelasonto. Kodwa ngezinye izikhathi Okuhlukile wamukeleke, akudingekile ukuba athukuthele.
Misa imithetho lekusasa
Ngakho ngaqala ukusebenza imikhuba yakho. Sekuyisikhathi cabanga yabo imicikilisho yokusebenzelana kusihlwa ezikusiza ukuzumeka. Mhlawumbe kufanele dim izibani bese uvala ithelevishini sehora ngaphambi sokulala. Futhi, zama ukwenza awulokothi wenze-ezihlobene nomsebenzi lutho embhedeni. Uma ukuhlobanisa embhedeni umsebenzi, ulukhuni kakhulu ababephumula ngayo lapho. Ungenzi lutho embhedeni ukuthi ecasulayo.
Musa udle noma uphuze utshwala ngakwesokudla ngaphambi sokulala
Uma udle sekwephuzile, ungakwazi avele isilungulela, okuyinto konakalisa iphupho. Kuyefana nasendleleni utshwala - utshwala okukuvimbela ngilale, ngisho noma kubonakala sengathi isimo kuyindlela reverse. Kukhula isikhawu phakathi siyadla noma siyaphuza nezikhwama zokulala kungcono ngoba kuthinta impilo yakho. Zama njalo gcinani lokhu engqondweni.
Beka amagajethi for isigamu sehora ngaphambi sokulala
Nokho, lo mkhandlu, lapho abaningi bakhetha ukukhohlwa, kukhona impela icala enamandla ke. Ukukhanya blue kusuka izikrini yezinto zobuchwepheshe liphazamisane melatonin umzimba umkhiqizo, i-hormone elawula ukulala. Ngenxa yalokho, awukwazi ukulala ngoba umzimba wakho ukuthi awulona ngomumo.
Nethezeka isigamu sehora noma ihora ngaphambi kokulala
Zama ukufunda incwadi noma umagazini okuthandayo. Kubalulekile ukuthi babengeke ezihlobene ukusebenza. Ubhale okucabangayo. Ochwepheshe bathi nokuthi ukubhala phansi okucabangayo kusiza lokubhekana nokucindezeleka. Cabanga inhlanzeko isiko ezokwenza athobe wena. Zama sokuzindla. Isilingo ukuze ubone ukuthi evumelana nawe best, futhi njalo ukuyisebenzisa nesokuphumula.
Musa ngiyolala sesidlile
Ochwepheshe bakholelwa ukuthi ubuthongo ntambama, banela ukuthimba kuphela ukhathale. Uma uqala ukucwila ubuthongo obukhulu, bese uvuka, uyozizwa ukhathele. Ngaphezu kwalokho, iphupho ngeke kukusize ukuba bavuselele amandla, uma bengalali ngokwanele ebusuku.
Zama umsebenzi noma uhambo emoyeni opholile ekuseni
Uma uya e ilanga, umzimba wakho uyama esikhiqiza melatonin futhi uthola ophethe vivacity. Nokho, ngeke kube okubi nakakhulu, futhi umphumela ukuqeqeshwa ntambama - nje ungahambi ezemidlalo ngakwesokudla ngaphambi sokulala.
Iqale umkhankaso ukushintsha isimiso yayo
Mhlawumbe ngaphezu kwanoma yini isigqi lomzimba kuthinte ukukhanyisa zemvelo. Uma une ithuba, ukuya mkhankaso. Lapho uzokwazi bavuke lapho kuphuma ilanga futhi alale ekushoneni kwelanga, ozokusiza ukuba axazulule le schedule.
Misa njalo ukukhathazeka ngoba ubuthongo
Yiqiniso, kulula wathi Nokho, kunokwenza, abantu enilindé nge nengebhe ubusuku bheka at the clock kwaze kwaba sentathakusa, aye aqale ukuzihlanganisa ubuthongo imizwelo engakhi. Lokhu kungaholela ukuqwasha okuphikelelayo. Zama ukuqeda abangane abanjalo. Ungayibambi lokulala, iwashi akuncikile embhedeni, uma ungakwazi ukulala. Ungacabangi ukuthi nokungalali - kungcono inhlekelele, cabangela ukuthi ungakwazi masinyane ukuzumeka ngenxa yokukhathala ngosuku olulandelayo.
Uma ukhathazekile ngoba zokuqwasha, umzimba wakho uqala ukukhiqiza ama-hormone okucindezeleka, futhi isimo zaba zimbi. Funda uphumule ngokulawula imisipha ngamunye ngamunye.
Shintsha ngombono wakho iphupho
Leli lisu ebalulekile izingxenye ezimbili. Eyokuqala - yobuchopho. Udinga ukushintsha umbono wakho ukuqwasha. Ezimweni eziningi, abantu nje khulisa inkinga futhi bakholelwa ukuthi ubuthongo incane kakhulu kunalokho eliyikho ngempela kuyinto. Ingxenye yesibili - ukusetshenziswa amacebo aziphumulele. Ungase futhi usize ukudala isimo kahle ibekwe ukulala.
Uma bungehli ubuthongo, ungaqambi amanga embhedeni
Leli liqhinga silula: uma ungeke ukulala, ungaqambi amanga embhedeni ize. Uma ungakwazi ukulala imizuzu engaphezu kwamashumi amabili, uvuke embhedeni ukwenza enye into, kodwa musa ukusebenzisa ikhompuyutha, ifoni noma uvule TV ukuze singathwesi isimo sibe sibi inkinga. Izazi zikholelwa ukuthi lezi zindlela kungasiza stop embhedeni bophezela ngihlaselwe imizwelo ebuhlungu. Ngaphezu kwalokho, ukungalali ngokwanele lula lula inkinga ngosuku olulandelayo.
Misa uzama ukuzumeka
Kungase kuzwakale ezihlekisayo, kodwa eqinisweni, ezama ukulala akudingekile, kungcono uzame hhayi ukuzumeka. Uma elele embhedeni bese uzama ukuba bahlale bephapheme, konke ngaphandle ukukhathazeka ngalokho akusho ukuzumeka, ukuthola kulula ukuba ngehlise umoya futhi ubuthongo. Ochwepheshe bakholelwa ukuthi leli qhinga kusiza ukuqeda ukukhathazeka, okuyinto kuvimbela abantu abaphethwe nokuqwasha.
Kanjani ukuze ufunde ukuzumeka masinyane futhi ukulala?
Yini okumelwe uyenze? Ingane akusho khona ukulala ebusuku. Okufanele ukwenze wamlalisa ubuthongo ingane kahle ebusuku?
Indlela yokubhekana ubuthongo emsebenzini: izindlela eziphumelelayo kanye nezincomo
Lukhuni Steel - ubuchwepheshe elidala amamaterial
Indlela Putty izindonga ngaphansi lodonga: igxathu negxathu Umhlahlandlela
'Indlu yaseMonastic' - ikhekhe ehlobo
Izitolo "chalcedony" eMoscow - indawo ephelele ukukhetha isipho salokhu fashionista
Prince Alexander saseNevsky: Biography of the umuntu omkhulu
Izimbangela, Izimpawu kanye Ukwelashwa laryngitis
Licorice: umonakalo noma inzuzo?
Shellac nge licwebezele. ongakhetha manicure